Khariidadda Google API: Raadi, Jiid oo Cusboonaysii Goobtayda | Martech Zone
Axad, Juun 30, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waxaan iibsaday Hacks-ka Google Map shalay laakiin waxaan ku yara niyad jabsanahay buugga. Khaladka malaha qoraaga, laakiin buuggu waa mid aad uhore horey udhacay tan iyo markii lasii daayay Google's Geocoder iyo Google's version 2 ee uu yahay API.
Waxaa jiray xiriiriyeyaal aad u tiro yar oo buugaagta ah sidaa darteed waxaan awooday inaan hubiyo goobo fara badan oo aan arko sida ay ula jaanqaadeen sii deynta cusub. Waxaan u dhisayaa khariidad isku dhaf ah goob cusub oo aan dhisayo. Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa in qof maxalli ahi awood u yeesho inuu cinwaankooda ku dhigo khariidad ka dibna cusbooneysiiyo meeshooda haddii calaamadduhu uusan joogin meesha ugu habboon.
Qaar ka mid ah hagaajinta aan sameeyay:
Isticmaalka V2 Geocoder
Adoo adeegsanaya waxqabadka jiidaya khariidada
Cusbooneysiinta loolka iyo dhigta foomka foomka (kuwan waa la qarin karaa dabcan)
Ku soo koobidda loolka iyo dhigta illaa 8 sax sax ah
Naafo ka dhigista foomka si uusan qofku ugu dari karin wax ka badan hal meel
Riix HALKAN DEMO shaqeyneysa.
Waxaan u qaabeeyay astaamahayga gaarka ah ikhtiyaar sare. Fadlan faallo uga tag qormadan haddii aad 'amaahdo' koodhkayga ama haddii aad si uun u wanaajiso. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko waxaad sameyn doonto. Tallaabooyinkeyga xigga waxaa loogu talagalay isticmaalaha inuu doorto nooca calaamadeeyaha ay jeclaan lahaayeen iyo sidoo kale inuu sawir yar oo muuqaal ah ku rido daaqadda macluumaadka.
Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho lambarka - waad ku deeqi kartaa a mahadsanid Paypal-kayga.
Baacsiga dabada: Harry Potter iyo The Long Tail
23, 2006 at 10: 50 PM
Waxaan u wareejiyay qaar ka mid ah bogagga boggeyga. Tan iyo markii aan bilaabay Cinwaanka Fix Waxaan tilmaamay wax tixraac ah goobtaas.
Qoraal yar oo ku jira URL-ka http://www.addressfix.com,
Ka saar “,” oo xiriirku wuu shaqeeyaa 😛
BTW, mashruuc weyn. 🙂
Mahadsanid, Aswin - waan hagaajiyay! Taasi waxay ahayd mashruuc madadaalo leh.
Agoosto 24, 2007 saacaddu markay ahayd 11:41 PM
Haye, Shaqo weyn mashruucan! Waxaad tiri waa laga yaabaa inaan amaahano oo aan hagaajino koodhka, laakiin waa halkee?